39 “Zvino iwe, haiwa mwanakomana womunhu, profitira Gogi,+ uti, ‘Zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: “Tarira ndichakurwisa, haiwa iwe Gogi, iwe jinda guru raMesheki+ naTubhari.+ 2 Ndichakutendeudza ndokutungamirira,+ ndoita kuti uuye uchibva kumativi ari kure kwazvo okuchamhembe,+ ndokuunza pamakomo aIsraeri. 3 Ndicharova uta hwako kuti hubve muruoko rwako rworuboshwe, uye ndichaita kuti miseve yako iwire pasi ichibva muruoko rwako rworudyi. 4 Uchafira pamakomo aIsraeri,+ iwe nemapoka ako ose nemarudzi auchange uinawo. Ndichaita kuti uve zvokudya zveshiri dzinodya nyama, shiri dzine mapapiro emarudzi ose, nezvikara.”’+ 5 “‘Uchafira musango,+ nokuti ini ndazvitaura,’ ndizvo zvinotaura Changamire Ishe Jehovha. 6 “‘Ndichatuma moto pamusoro paMagogi+ nepamusoro pevaya vanogara muzvitsuwa vakachengeteka;+ uye vanhu vachaziva kuti ndini Jehovha. 7 Ndichaita kuti zita rangu dzvene rizivikanwe pakati pevanhu vangu vaIsraeri, handichazobvumirizve kuti zita rangu dzvene risvibiswe;+ uye marudzi achaziva kuti ndini Jehovha,+ iye Mutsvene pakati paIsraeri.’+ 8 “‘Tarira! Zvichauya uye zvichaitika,’+ ndizvo zvinotaura Changamire Ishe Jehovha. ‘Iri ndiro zuva randakataura nezvaro.+ 9 Vagari vomumaguta aIsraeri vachaenda, vopisa uye vobatidza moto vachishandisa zvombo nenhoo duku nenhoo huru,—nouta nemiseve netsvimbo nemapfumo marefu; uye vachazvibatidzisa moto+ kwemakore manomwe. 10 Havazotakuri huni kubva kusango, kana kutsvaka huni mumasango, nokuti vachabatidza moto vachishandisa zvombo.’ “‘Vachatora zvinhu nechisimba kune vaya vaivatorera nechisimba,+ vopamba vaya vaivapamba,’ ndizvo zvinotaura Changamire Ishe Jehovha. 11 “‘Zvino pazuva iroro ndichapa Gogi+ nzvimbo ipapo, nzvimbo yemakuva pakati paIsraeri, mupata wevaya vanopfuura nomauri kumabvazuva kwegungwa, uye iwo uchadzivisa vaya vanopfuura nomauri. Vachaviga Gogi neboka rake rose revanhu ikoko, uye vachautumidza kuti Mupata Weboka raGogi.+ 12 Vaya veimba yaIsraeri vachavaviga kuti vachenese nyika, kwemwedzi minomwe.+ 13 Vanhu vose vomunyika vachaita basa rokuviga, ichava nyaya yakakurumbira kwavari pazuva randichaita kuti ndikudzwe,’+ ndizvo zvinotaura Changamire Ishe Jehovha. 14 “‘Vachatsaura varume vacharamba vachiita basa, vachapfuura nomunyika yacho, vachiviga, vari pamwe chete nevaya vanopfuura nomairi, vaya vachasara panyika, kuti vaichenese. Vacharamba vachitsvaka kusvikira mwedzi minomwe yapera. 15 Vaya vanopfuura nomairi vachapfuura nomunyika yacho, uye kana munhu akaona pfupa romunhu achagadzirawo chiratidzo pedyo naro, kusvikira vaya vanoita basa rokuviga variviga muMupata Weboka raGogi.+ 16 Zita reguta racho richanziwo Hamona. Ivo vachachenesa nyika yacho.’+ 17 “Zvino iwe, haiwa mwanakomana womunhu, zvanzi naChangamire Ishe Jehovha, ‘Iti kushiri dzine mapapiro emarudzi ose nokuzvikara zvose:+ “Unganai, muuye. Unganai kumativi ose pachibayiro changu, chandiri kukubayirai, icho chibayiro chikuru pamakomo aIsraeri.+ Muchadya nyama, monwa ropa.+ 18 Muchadya nyama yevane simba,+ muchanwa ropa remachinda epanyika, makondohwe, makwayana makono+ nenhongo, nzombe duku,+ mhuru dzakakora dzokuBhashani dzose zvadzo.+ 19 Muchadya mafuta kusvikira maguta+ uye muchanwa ropa kusvikira madhakwa, pachibayiro changu chandichakubayirai.”’ 20 “‘Muchaguta patafura yangu nemabhiza nevatyairi vengoro, vanhu vane simba nevarwi vemarudzi ose,’ ndizvo zvinotaura Changamire Ishe Jehovha.+ 21 “‘Ndichaisa kukudzwa kwangu pakati pemarudzi; uye marudzi ose achaona kutonga kwangu kwandakaita+ uye ruoko rwangu rwandakaisa pakati pawo.+ 22 Vaya veimba yaIsraeri vachaziva kuti ndini Jehovha Mwari wavo kubvira pazuva iroro zvichienda mberi.+ 23 Marudzi achaziva kuti yaiva mhosva yokukanganisa kwavo yakaita kuti ivo, imba yaIsraeri, vatapwe,+ nokuti vakava vasina kutendeka kwandiri, zvokuti ndakavavanzira chiso changu,+ ndikavaisa mumaoko emhandu dzavo, uye vakaramba vachiurayiwa nebakatwa, vose zvavo.+ 24 Ndakavaitira zvinoenderana nokusachena kwavo uye zvinoenderana nokutadza kwavo,+ uye ndakaramba ndichivavanzira chiso changu.’ 25 “Naizvozvo zvanzi naChangamire Ishe Jehovha, ‘Zvino ndipo pandichadzosa vakatapwa vaJakobho+ ndonzwira ngoni imba yose yaIsraeri;+ uye ndicharatidza kuzvipira kwakazara nokuda kwezita rangu dzvene.+ 26 Vachange vanyadziswa+ nokusatendeka kwavo kwose kwavakandiitira,+ pavachagara panyika yavo vakachengeteka,+ pasina angavadederesa.+ 27 Pandinovadzosa vachibva kune mamwe marudzi ndovaunganidza vachibva kunyika dzevavengi vavo,+ ndichazvitsvenesawo pakati pavo, marudzi mazhinji achizviona.’+ 28 “‘Vachaziva kuti ndini Jehovha Mwari wavo, pandichaita kuti vatapwe nemamwe marudzi ndovaunganidza panyika yavo,+ zvokuti hapana kana nomumwe wavo wandinozosiya kuti asarezve ikoko.+ 29 Handizovavanzirizve chiso changu,+ nokuti ndichadurura mudzimu wangu paimba yaIsraeri,’+ ndizvo zvinotaura Changamire Ishe Jehovha.”